GAROOWE, Puntland - Madasha Puntland Focus [PFG], oo ay ku mideysan yihiin Siyaasiyiin iyo xilal kala duwan kasoo qabtey Puntland iyo dowladihii hore ee Soomaaliya, ayaa war qoraal ah kasoo saarey maanta oo isniin ah go'aankii Jarmalka.
PFG ayaa War-saxaafadeedka uga hadashay joojinta mashruucii lagu dhisayay Wadada Jalam iyo Xarfo ee Puntland.
Puntland Focus Group [PFG] waxay si dhow ula socotaa warbixintii ay soo saartay Safaaradda Jarmalka ee Nairobi, Kenya, taariikhdu markay ahayd 06-09-18.
Warbixintaas ayaa ku saabsan in ay si buuxda uga baxday heshiiskii dhismaha wadada XARFO-JALAM ee ay GIZ kula jirtay Hay'adda Wadooyinka Puntland (PHA), sababo mugdi iyo musuq shaqada la xiriira darteed. Sidaa awgeed,
2. PFG waxay ku baaqaysaa in si degdeg ah loola xisaabtamo, sharcigana loo horkeeno ciddii ka damaysay fadeexaddan qaawan ee lagu weeraray tiirarka dhaqaalaha Puntland.
3. Waxaan Dawladda Jarmalka iyo Hay'adda GIZ ka codsanaynaa inay wixii kaharay lacagtii dhismaha wadada XARFO-JALAM hakiyaan oo aan meel kale loo duwin inta ay dhacayso doorashada Puntland ee January 8, 2019 ee loo helayo hogaan cusub oo saxa khaladka dhacay. Majiro mashruuc uga muhiimsan reer Puntland dhismaha wadada XARFO-JALAM oo lacagtani geli karto.
5. Waxaan ugu baaqaynaa Madaxweyne Cabdiweli GAAS iyo xukuumadiisa sii socota "inaysan marna dhaleecayn caalwaa ah" u soo jeedin Dawladda Jarmalka iyo GIZ si looga fogaado waxyeello u timaadda xiriirka iskaashi ee mustaqbalka.
Mo Farah oo lagu dhibaateeyay dalka Jarmalka
Caalamka 07.03.2018. 12:13